Faayilii - Hiriira hawaasa Oromoo, Waashingtiteen Diisii
Meseensonni Hawaasa Oromoo Yunaayitid Isteetis jiraatan kaleessa as Waashingteen Diisii keessatti hiriira bahuudhaan, miidhaa mootummaa Itiyoophiyaatiin raawatamaa jira jedhan balaaleffatanii jiru.
Qindeessaan hiriira kanna fi Itti Aanaa dDura Ta’aa Boordii Hawaasa Oromoo Waashingteen Diisii fi naannoo ishee kan ta’an obbo Asaffaa Kitil akka jedhanitti, hiriirichaa irratii kan hirmaatan Oromootaa naannoo Diisii qofa iituu hinta’in kutaalee biyya Yunaayitid Isteet keessa akka ta’e dubbatu.
Kaayyoon hiriirichaa waggoota sadan darbaniif miidhaan mootummaa Itiyoophiyaatiin mirgaa dhala namaa irratti raaw’atamaa jiruu, keesumaa uummata Oromoo irratii wantii ta’aa jiru waan itti fufee jiruuf akka hubannaan caalaan itti kenamuuf jecha kan hiriiricha bahan tahuu ibsanii yakkii amma deemaa jiru yakka farra manoomaa fi yaakka waraanaa waan ta’eef mootummaan yunaayitid isteets amma ammaatii tarkaanfiin inii fudhate waan godhamaa jiruun waan wal hin gitineef tarkaanfiin caalaan aaka fudhtamu gaafachuuf baane, jedhan.
Yunaayitid Isteetsti Ambaasadarii Itiyoophiyaa Fitsum Araggaa gaafilee namoonii hiriira bahan kaasan irratii, keesumaa olantumaa seeraa kabajuu irratii komii dhihaachaa jiru ilaalchisee yaada isaan qaban gaafannee, deebii kennanii jiran.
Karaa biraatiin hiriirtonnii Raadiyoo Sagalee Ameerikaa (VOA) irrattiis mormii qaban dhiheessaniiru. Qindeesaan hiriirichaa Obbo Asaffaa Kitil mormiin qaban VOA Sagantaa Afaan Amaaraa irratti akka ta’e dubbtan.
Bulchiinsi Sagalee Ameerikaa (VOA) waa’ee hiriirichaa fi waa’ee himannaa itti dhihaatee irratti har’a ka deebii kenne yoo tahu, hoggansi Sagalee Amerikaa ganama har’aa xalayaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Kutaa Gaanfa Afrikaa oduu sirrii hin taane tamsaasudhaan himatu isa qaqqabeera.
Sagaleen Ameerikaa oduu dogoggora hin qabne, madaalawaa, dhugaadhaa fi sirrii tamsaasudhaaf qajeelfama murannoo qabu hordofa. Kanaafuu, himannaa kanan wal-fakkaataan kamiinuu baldhinaa fi gad fageenyaan akkuma qorannu himannaa kanas qulqulleesudhaan tajaajillii Gaanfa Afrikaa, seera ykn chaartaraa VOAn ittiin bulu, ulaagaa gaazexeesummaa Sagalee Amerikaa akkasumas qajeelfama ojiiwan fooyya’aa hordofuu isaa ni qoranna,” jedhee jira.
Miseensonni Hawaasa Oromoo Yunaayitid Isteetis Waashingteen Diisiitti Hiriira Mormii Bahan